Ukucushwa kwe-DA-7 A2-standard 1.Constant Height Head Ends: Ukulungiswa kwekhanda okuphakeme okulungiselelwe kwenza ukufinyelela okusheshayo nokulula kwekhanda lesiguli, intamo ne-thorax. Imizila ejikelezayo ye-2.Split: Imigwaqo eseceleni ye-4pcs PP ihlinzeka isiguli ngokuvikelwa ekuweni futhi imigwaqo eyengeziwe engama-2 pcs eseduze kwebhodi yezinyawo inikezela kakhulu ngokuphepha futhi ihlinzeka nokusekelwa ngesikhathi sokuma kwesiguli. Isistimu engu-3.Integrated Scales system: Iphaneli yokulawula izikali ezingaphansi kombhede ngaphansi kwesiqalo sonyawo ivikelekile emitheleleni ...
Ukulungiswa kwe-DA-2 A3-standard 1.Split Side Rail: The Rail 4pcs PP Rail Attound isiguli sivikelekile ekuweni. Ipulatifomu engu-2.Removable Matress: Ukususa okulula futhi kulula kokuhlanzeka. Ipulatifomu yomatilasi ingenza i-X-ray ngebhodi elingemuva futhi inikeze isiguli ukuthi sikhululeke kakhudlwana. Izikhiye zamabhodi we-3.H / F: Ukhiye webhodi yombhede uvimbela ukususwa ngengozi kwamabhodi wombhede lapho uqhuba noma uphatha umbhede. Ama-bumpers ekhoneni we-4Postective 5.Lifting pole or infusion stand hole 6.Metress holders ...
Ukucushwa kwe-DA-2 A2-standard 1.Split Side Rail: The Rpcs PP Rails sideways has a Patier safe to protect to fall. Ipulatifomu engu-2.Removable Matress: Ukususa okulula futhi kulula kokuhlanzeka. Ipulatifomu yomatilasi ingenza i-X-ray ngebhodi elingemuva futhi inikeze isiguli ukuthi sikhululeke kakhudlwana. Izikhiye zamabhodi we-3.H / F: Ukhiye webhodi yombhede uvimbela ukususwa ngengozi kwamabhodi wombhede lapho uqhuba noma uphatha umbhede. Ama-bumpers ekhoneni we-4Postective 5.Lifting pole or infusion stand hole 6.Metress holders ...
Ukulungiswa kwe-DA-2 A1-standard 1.Split Side Rail: The 4pcs HDPE Railwaysways kutoa isiguli ukuvikela ekuweni. Ipulatifomu engu-2.Removable Matress: Ukususa okulula futhi kulula kokuhlanzeka. Ipulatifomu yomatilasi ingenza i-X-ray ngebhodi elingemuva futhi inikeze isiguli ukuthi sikhululeke kakhudlwana. Izikhiye zamabhodi we-3.H / F: Ukhiye webhodi yombhede uvimbela ukususwa ngengozi kwamabhodi wombhede lapho uqhuba noma uphatha umbhede. Ama-bumpers ekhoneni we-4Poseswayo 5.Ukuphakamisa isigxobo noma ukumiliselwa izimbobo zokuma 6.Matress Holde ...